Jery ​​todika amin'ny hoavin'ny dokambarotra horonantsary | Martech Zone
Sabotsy 15 Novambra 2008 Alahady, Novambra 25, 2012 Douglas Karr
Navoaka ny oniversite Stanford Zunavision, teknolojia mahaliana izay mamela ny dokam-barotra hampiditra sary na horonan-tsary anaty horonantsary amin'ny horonan-tsary hafa - na dia mihetsika aza ny fakantsary. Teknolojia mahavariana saingy tsy azoko antoka fa ho ekena amin'ny ankapobeny izy io noho ny toetrany manelingelina. Angamba raha tsy ataon'izy ireo miharihary ny doka.
Ny fampanantenan'ity karazana haitao ity dia mety ho an'ny indostrian'ny sarimihetsika hanatanterahana ny fametrahana ny vokatra amin'ny famokarana post. Izany dia afaka manome tahiry goavambe ho an'ny indostrian'ny sarimihetsika amin'ny alàlan'ny tsy fananana sy fotoana fanaovana dokambarotra alohan'ny fotoana. Ary koa, tsy mila fitaovana fanaovana dokambarotra ara-batana izany.
Raha mijery amin'ny alàlan'ny RSS ianao ary tsy mahita ilay horonantsary, kitiho ny ohatra iray amin'ny Teknolojia fampidirana horonan-tsary Stanford Zunavision.
Tags: teknolojia stanforddokam-barotra amin'ny horonan-tsary
15 Novambra 2008 à 2:51
16 Novambra 2008 à 10:04
17 Novambra 2008 à 3:06
misaotra noho ilay lahatsoratra mahafinaritra